Yini engenakudliwa nge-cholesterol ephezulu? > Ukudla ngesifo sikashukela
Yini engingayidla nge-cholesterol ephezulu futhi yini engingakwazi? itafula lomkhiqizo
I-cholesterol iyinhlangano eyenzelwe wonke umuntu. Abaningi benza iphutha becabanga ukuthi njengoba incane, kungcono. Kunezinombolo ezithile ezibonisa ukujwayelekile noma ukuphambuka kokuqukethwe kwakho esegazini. Kubantu bobulili obuhlukile nobudala, lezi zibalo zihlukile. Labo abanokulimazeka okuthile bafuna ukwazi ukuthi yini abangayidli nge-cholesterol ephezulu.
Imikhiqizo Evinjelwe futhi evunyelwe
Ukudla okusheshayo, ukhukhunathi, imajarini, ukhilimu omuncu onokuqukethwe okunamafutha amaningi, nebhotela kufakiwe ohlwini lokudla okuvinjelwe i-cholesterol ephezulu. Awukwazi ukudla ushizi no-ayisikhilimu.
Kwezinhlobo zenyama, akunconywa ukuthi udle duck nengulube. USalo nalo luvinjelwe. Ungadli isobho ngomhluzi wenyama. Ama-squid ama-Shrimp kuzodingeka futhi akhishwe ekudleni. Kuzovela kwesokudla ukudla ngenkathi ulandela ukudla. Kuhle ukudla imifino nezithelo. Kungcono ukwenza ukudla ngosuku.
Kodwa-ke, ngokukhuphuka kwe-cholesterol yegazi kwabesifazane nabesilisa, ungadla ukudla okuningi. Ongakudla:
Le mikhiqizo ayivunyelwe nje ukuthi isetshenziswe ngesilinganiso esiphakeme, kepha futhi yehlisa izinga layo. Kubandakanya nezinhlanzi ezinamafutha, izinhlobo ezahlukahlukene zetiye eliluhlaza, uwoyela womnqumo. Udinga ukudla ama-alimondi nama-pistachios. Isazi sezempilo sizokusiza ekutholeni ongakwazi ukukudla nokuthi yini evunyelwe.
Imikhiqizo Yenyama nemikhiqizo yobisi
Ngabe ubisi lunayo i-cholesterol? Lo mkhiqizo ungadliwa uma unokuqukethwe kwamafutha okungaphansi kwamaphesenti amathathu. Kungcono ukuphuza i-kefir 1%. Ubisi lwe-Sour nalo kufanelekile. Ama-yoghurts, yilawo kuphela aqukethe ubisi kuphela kanye ne-sourdough okufanele kudliwe. Kuyasiza ukuthola ukuthi ushizi ungadliwaphi nge-cholesterol ephezulu, futhi futhi - kungenzeka yini ukuphuza ubisi lwembuzi?
I-Curd 9% ingadliwa uma kungukuthi okwenziwe ekhaya. Ngaphezu kwalokho, kufanele ilungiselelwe ngendlela ekhethekile. I-Cream isuswa kuqala, futhi kulapho kuphela lapho kufakwa khona imvubelo. Ushizi we-Cream noshizi we-sausage kufanele ungafakwa ekudleni. Kepha ushizi owenziwe ekhaya unokuqukethwe okunamafutha okufika kuma-4% kungadliwa ngokuphephile. Ubisi lwebhokhwe ludliwa luhlaza, kepha ngokulinganisa, lubheka ukudla okudla ngokudla.
Ingulube, njenge-bacon, ivinjelwe. Ezinhlotsheni zenyama, kunconywa kuphela inyama yomvundla. Okuningi ungadla inkukhu ethosiwe noma ebilisiwe kanye ne-turkey. Ikakhulu i-cholesterol eningi emnyama isikhumba senyoni. Ngakho-ke, kufanele isuswe ngaphambi kokupheka.
Inyoni equkethe amanoni amaningi, ngokwesibonelo, idada, nayo ayikufanele ukudliwa. Noma kunjalo, ungathatha inyama ye-goose. Isikhumba sibuye sisuswe ngaphambi kokupheka. Akukho cholesterol eningi esibindini senkukhu okufanele ivinjelwe. Kodwa-ke, kubalulekile ukucubungula indlela yokupheka, ukuze ungangezi amafutha "ngokweqile".
Ukunxusa akunconywa. Izinsimbi zesibindi nezinqatshelwe. Isibindi senkukhu ebilisiwe, noma kunjalo, iqukethe i-cholesterol encane, ngakho-ke ingadliwa ngaphandle kokulimala okulinganiselwe. Isibindi se-Goose kufanele singafakwa ekudleni.
Kubalulekile! I-Barbecue ayivunyelwe, noma ngabe yenziwe enkukhu.
Abantu abaningi bacabanga ukuthi nge-cholesterol ephezulu, kuhle ukudla izinhlanzi nokunye ukudla kwasolwandle. Lokhu kuyiqiniso ngokwengxenye, ngokubhuka okuthile. Ungathola ukuthi hlobo luni lwezinhlanzi ongazidlela kanye okufanele udle ngalo nge-cholesterol ephezulu, kanye nodokotela onempilo. Izitsha zenhlanzi ezibhemayo nezinosawoti zingalimaza kakhulu.. Ukudla okuhleliwe nakho kuwela eqenjini elifanayo. Ngisho ne-caviar kungcono ukungadli.
Kuhle ukudla inhlanzi nge-cholesterol ephezulu lapho ibhakwa ku-foil noma ibilisiwe. Izinduku zama-Crab ne-sushi azinconywa ukusetshenziswa. Kepha lokhu kukhawulelwa akusebenzi ezindle zasolwandle. Ingadliwa kunoma yiliphi inani.
Isinkwa esinamakhalori aphezulu kakhulu yi-premium. Kunamakhalori amaningi emikhiqizweni ye-confectionery. Nge-cholesterol ephezulu, kukhethwa izinhlobo zokudla nezinempilo kuphela. Isinkwa esiphelele sokusanhlamvu, sinothile ngamavithamini A, B no-K.
Ngokusetshenziswa kwemikhiqizo enjalo, ukusebenza kwamathumbu kuyathuthuka, ubuthi buyakhishwa emzimbeni. Ngokutholwa kwayo njalo emgodini wesisu, inani elifanele le-fiber linikezwa.
Isinkwa se-Bio singomunye umthombo wama-carbohydrate anempilo. Kubhakwa ngaphandle kwamaqanda, amafutha ezitshalo kanye nemvelaphi yezilwane. Kwenziwa nge-sourdough yemvelo.
Isinkwa esinjalo asinayo i-cholesterol. Kwenziwa kusuka kufulawa webanga eliphansi, okungabangeli ukuvutshelwa endaweni yokugaya ukudla.
Imikhiqizo enganciphisa cholesterol yegazi inezinto ezithile zokulandela ekwakhekeni kwazo. Eminye imifino inothile ku-fiber, polyphenols kanye namavithamini. Izinto ezinjalo zithuthukisa ukumuncwa kwamafutha futhi zinganciphisa i-cholesterol embi.
Yidla imifino nezithelo njengoba kuyalelwe ngumondli.
Imifino enconyiwe ifaka:
Ukusetshenziswa kwamazambane, i-zucchini, ama-turnips kuzosiza ukunciphisa ukubalwa kwegazi.
Kuhle ukudla izithelo nge-pectin. Lokhu kufaka phakathi ama-apula, ithini lamapheya, amaplamu. Kunconywa ukuthi udle ama-Persimmons, ama-tangerine nama-oranges, i-grapefruit. Ukusetshenziswa kwamajikijolo kusiza ukuguquguqula amazinga we-cholesterol. Kuyasiza ukudla ubhanana - asusa ubuthi futhi enza umzimba usebenze ngokwezifiso umzimba.
Kungenzeka yini ukudla ushokoledi
Chocolate ivunyelwe kubantu abane-cholesterol ephezulu. Noma kunjalo, ezinye izimo zinakwa.
Ushokoledi omnyama kuphela ophephile ngokuphelele. Umkhiqizo onjalo awukwazi ukuphakamisa i-cholesterol. Izinga layo lansuku zonke lingama-50 g ngosuku.
Ezinye izinhlobo zikashokholethi azinconywa. Ama-tile obisi ayingozi ikakhulukazi.
Ushokoledi omhlophe nawo awunamphumela omuhle. Ayiqukethe i-cocoa, ushukela nemikhiqizo yobisi kuphela.
Izindleko zikashokholethi, eziqukethe i-cocoa eningi, ziphakeme impela. Noma kunjalo, imikhiqizo enjalo isiza ukugcina amazinga e-cholesterol afanele.
Uma unaka ubuqili obunjalo bokudla ushokoledi, ungazijabulisa ngoshukela njalo.
Isisekelo samaswidi amaningi ushukela. Kodwa-ke, umthombo we-cholesterol kuzo ngamafutha ezilwane. Amabhisikidi, ama-meringues kanye nama-roll aqukethe amaqanda no-ayisikhilimu ongakhuphula izinga lezakhi zomzimba eziyingozi. I-cholesterol emnandi nesihloko okuxoxwa ngaso njalo okufanele sibhekwe kabanzi.
Yini engingadla amaswidi:
Imikhiqizo enjalo izokhanga wonke amazinyo amnandi. U-ayisikhilimu, ngokwesibonelo, u-ayisikhilimu, uwumkhiqizo onqatshelwe.
Ijusi, iziphuzo notshwala
I-cholesterol ekhuphukile itholakala kuwo wonke umuntu wesihlanu ngaphezulu kweminyaka engama-40. Isikhathi eside, ukwephulwa kwe-pathological of metabolism yamafutha akukuthinti inhlala-kahle. Kodwa-ke, ngenxa yalokho, zingadala i-pathologies ye-inhliziyo.
Ukuphuza ama-juices kuyindlela ejwayelekile yokwenza ngokweqile i-cholesterol. Iziphuzo ezifakiwe zingagxili ukoma kwakho kuphela, kepha futhi zingagcwala umzimba ngamaminerali namavithamini adingekayo.
Amajusi anemiphumela eminingi ezuzisayo:
Iziphuzo zemifino nezithelo ziqukethe izinto eziningi ezinempilo. Isibonelo, ama-200 ml wejusi le-apula aqukethe izinto eziningi zokulandela kanye namavithamini njengama-apula angama-2-3.
Ijusi alinayo i-fiber. Lokhu kwandisa ukuhlukunyezwa kwabo ngumzimba.
Ngokusebenzisa ama-jusi ngokulingana, izinqubo ze-metabolic emzimbeni ziyasheshiswa, kanti nemikhiqizo eyimfucumfucu eyingozi idonswa kalula.
Kunconywa ukusebenzisa ama-juices amasha asanda kufakwa ubhanana, imango, amagilebhisi. Kodwa-ke, ngokusebenzisa kwabo ngokweqile, umzimba ulimaza okuthile.
Kunconywe ukuthi kuncishiswe inani lotshwala obudakelwa kwababili ngosuku kwabesilisa neyodwa kwabesifazane. Njengoba inokuqukethwe okuhlukile kotshwala, inani le-servings lingahluka. Kufanele ucabangele imithamo enjalo (malini ongaphuza ngosuku):
I-350 ml kabhiya.
I-150 ml yewayini.
I-40 ml yotshwala i-8% noma i-30 ml yotshwala obumsulwa.
Lapho uphuza utshwala, inani le-cholesterol embi alincishiswa, kepha izinga lokuhle linganda. Ngokusebenzisa kabi utshwala, inhliziyo, isibindi kanye nohlelo lwamathambo kuyathinteka.
I-cholesterol yansuku zonke, kuya ngeminyaka
Ukudla nsuku zonke kwe-cholesterol ngosuku akufanele kudlule ama-milligram angama-500. Inkomba efanelekile ngu-300 mg. Ukubona izinga labo, baphasa ukuhlolwa kwegazi okune-biochemical.
Ngale njongo, i-PTI (inkomba ye-protrobin) iyaqashelwa. “Ngokuqina” kwegazi, umuntu angaba nesifo senhliziyo. Ukungafaki umphumela onjalo kuzosiza ukulandela ukudla nokuthatha imishanguzo ebekwe udokotela.
Ingakanani i-cholesterol engadliwa ngosuku incike kwizici zomzimba womuntu ngamunye. Uhlobo lokudla okunempilo lubambe iqhaza elibalulekile ekugcineni impilo. Ukudla kufanele kube nenani elilungile lezinto zokulandela umkhondo namavithamini.
Ukudla nemenyu eseduze yeviki
Nge-cholesterol ephezulu, kunconywa ukulandela ukudla. Kodwa-ke, umsoco ungahluka futhi umnandi kakhulu. Ukudla kufanele kuklanywe ngendlela yokuthi umuntu angabi nemizwa engemnandi ngenkathi ebuka uhlelo lokudla okunempilo. Ukudla okune-cholesterol ephezulu kwabesifazane ngemuva kweminyaka engama-50 izinsuku ezi-5 noma ezi-7 kuyindlela yokudla okunempilo, kepha ungabona amacebo wokudla okulinganiselayo. Umkhawulo yimikhiqizo eyingozi kuphela.
Imenyu eyisampula ye-cholesterol ephezulu:
1 usuku Ekudleni kwasekuseni, yidla isaladi yemifino bese uphuza ujusi wewolintshi. Kwasemini, lungisa izingcezu ezi-2 zesinkwa noshizi ngamaphesenti ancishisiwe wamafutha. Ungadla ama-300 g enkukhu ebilisiwe nelayisi. Iborsch enamafutha aphansi ihanjiswa isidlo sakusihlwa.
2 izinsuku. Ukudla kwasekuseni, isaladi yemifino. Kwasemini, ilayisi ngenkukhu. Esidlweni sakusihlwa, yidla i-200 g ye-cottage shizi enamafutha amancane.
3 izinsuku. Ekuseni, yidla isaladi yemifino namaqanda aqhekeziwe. Kwasemini, lungiselela isobho lemifino. Ngesidlo sakusihlwa, yenza inhlanzi ebhakwe.
4 izinsuku. Kwisidlo sasekuseni, yidla iphalishi, yenkukhu yenkukhu ngemifino, nangedina - imifino ebhekwe kuhhavini.
5 izinsuku. Ekuseni, phuza ujusi we-orange, ulungiselele isobho senkukhu ngesidlo sasemini. Kusihlwa, yidla iqanda nesaladi yemifino.
Uma ulandela leli tafula ukwehlisa i-cholesterol, le nkomba ngeke inyuke. Kungcono ukuxhumanisa ukudla kwakho nodokotela onempilo onolwazi. Ukudla nge-cholesterol ephezulu emadodeni, imenyu yesonto kufanele icabangele izici zomzimba nendlela yokuphila. Inani elikhulu le-cholesterol embi, etholakala ekudleni okunamafutha ezilwane, njengamafutha patties inyama, kungadala izinkinga zempilo. I-cholesterol enhle kufanele futhi ibe sezingeni elifanele.
Ungawehlisa kanjani i-cholesterol Ukudla ukwehlisa i-cholesterol.
I-cholesterol ephezulu ivimbele uhlu lokudla
Umthetho oyinhloko wokudla okwelashwa nge-cholesterol ephezulu wukunciphisa ukudla kwemvelaphi yezilwane ekudleni kwansuku zonke.
Uhlu olujwayelekile lokudla okungenakudliwa nge-cholesterol:
Imikhiqizo yobisi enamafutha, enjengokhilimu omuncu no-ukhilimu,
Inyama ikhipha inyama (izinso, isibindi, ubuchopho, isisu, ulimi),
Ukubhaka, amaswidi, i-confectionery, ushokoledi omhlophe nobisi,
Izitsha eziqukethe i-gelatin
I-bhiya neziphuzo eziphansi zotshwala.
Awungeke ukudla ukudla okuthosiwe okunamafutha amaningi wesilwane. Kuyadingeka futhi ukwenqaba ukudla umhluzi ocebile wenyama. Imikhiqizo efakwe kuhlu ihlanganiswa amandla ayo e-pathological okuqongelela i-cholesterol emzimbeni, kanye nekhono lokukhulisa ukwakheka kwe-cholesterol ye-endo native.
Imayonnaise yenziwa kusuka kumaqanda izikhupha futhi inokuqukethwe okunamafutha amaningi. Njengoba kungewona umkhiqizo wokudla oyisisekelo, akunakwenzeka ukukudla ngaphandle kwezinkinga. Ingulube iqukethe inani eliphakeme kakhulu le-cholesterol kumagremu ayi-100. Kulokhu, uma ungayidli le nyama, kunomthelela omuhle ekujuleni kwesimo se-lipid.
Ukusetshenziswa kwe-caffeine kuvusa ukushesha kokukhiqizwa kwe-cholesterol emzimbeni wakho. Kungcono ukuphuza ama-tincture we-herbal futhi ugcobe ngoshukela omncane.
Ayisebenzi kakhulu kodwa imikhiqizo evunyelwe
Udokotela kuphela ongavuma imenyu yokudla kokugcina, ebheka zonke izilonda ezihlangene zegciwane elibukwayo.
Imikhiqizo engadliwa ngamanani amancane uma kungekho okubhekwayo:
Amaqanda, okungukuthi ukusetshenziswa kweqanda elimhlophe kuvunyelwe,
I-caviar ebomvu nemnyama
Shrimp, squid nemisipha,
Irayisi emhlophe ejwayelekile ephethe i-cholesterol ephezulu, zama ukufaka esikhundleni esinsundu (sasendle), nokubomvu okungcono. Njengoba imhlophe lapho ihlanza kusuka egobolondeni okusanhlamvu ilahlekelwa iningi lamavithamini, amaminerali kanye nama-antioxidants. Irayisi yasendle, uma kuqhathaniswa, nezinsalela zegobolondo liwusizo kakhulu ku-hyperlipidemia. Izinhlamvu ezinjalo zingaphekwa njengephalishi elijwayelekile, kanye nokufaka imifino bese ibila ngokushisa okuphansi. Yize irayisi ejwayelekile nayo izosiza kakhulu.
Iporridge ene-cholesterol ephakeme ingadliwa ngokulingana, kepha awukwazi ukubilisa lesi sitsha ngokuqinile. Ungakhohlwa ngokuqukethwe kwekhalori ephezulu kwalokhu kudla. Futhi, ungangezi ibhotela ngaphandle komkhuba, ungasebenzisi kabi usawoti. I-Porridge evela ezitshalweni zikakhokho inothile ku-fiber yokudla, ngaleyo ndlela inomthelela ekusebenzeni okufanele kwamathumbu nokususwa kwamafutha amaningi emzimbeni.
Kuwo wonke okusanhlamvu, i-buckwheat inethonya elivezwa kakhulu le-antiatherogenic. I-Buckwheat iqukethe amavithamini we-B, i-PP, i-folic acid, ama-amino acid abalulekile, i-fiber yokudla. Zonke lezi zingxenye, lapho zigxilwe, zivimbela amazinga aphezulu e-cholesterol embi egazini. Qaphela, ngoba ngezilonda ezi-peptic zesistimu yokugaya kuhlinzekelwe ukudla iphalishi le-buckwheat.
Inyama yezilwane iqukethe i-priori eningi cholesterol, ikakhulukazi ingulube. Njengoba amaprotheni ezilwane nawo ebandakanyeka emetabolism yamandla, udinga ukudla izitsha zenyama. Ukuze ungavuseleli ukwanda kwe-cholesterol, kungcono ukunikeza ukukhetha inyama yenkukhu emhlophe. Izinkukhu eziphekwe zi-steamed noma kuhhavini zizolingana ngokuphelele ekudleni kwansuku zonke, imifino njengokwengezwa ayisoze yaba sendleleni.
Imikhiqizo ye-Offal, efana nesibindi, ayikukudla okujwayelekile okunconyiwe kwe-hypercholesterolemia. Ngasikhathi sinye, lokhu kususwa kungenisa izinto ezisebenzayo ezilandelayo emzimbeni:
Amavithamini eqembu B no-K,
Amaminerali afana ne-zethusi, i-potassium, i-phosphorus, i-molybdenum, insimbi,
Ama-amino acid abalulekile: i-lysine ne-methionine,
Kunconywa ukuthi udle inani elincane lezitsha zesibindi ukuvimbela ukuvela kwe-atherosclerosis kanye ne-vascular thrombosis.
I-Shrimp iqukethe i-150 mg ye-cholesterol ngamagremu ayi-100. Ngasikhathi sinye, ngamanani amancane, le nyama yasolwandle inxephezela ukuntuleka kwamafutha e-omega-3, anomphumela omuhle ekwehliseni i-cholesterol. Kunezinto eziningi ezingafuneki. Uncamela ukuhambisa futhi upheke lapho ukhetha indlela yokupheka.
Nge-cholesterol ephezulu, ungadla kakhulu imikhiqizo yobisi enamafutha amancane. Amafutha ushizi kanye noshizi, ngeshwa, ayihlangene ne-hyperlipidemia. Ubisi lungadakwa ngamafutha ayi-1%. Ukushintshela kubisi lwe-soy noma i-almond kuyanconywa futhi.
Ukudla okuvunyelwe (okwakhayo) kokuphazamiseka kwe-lipid metabolism
Imikhiqizo evunyelwe ingahlanganiswa ohlwini olubonakalayo olulodwa:
Imifino: iklabishi, i-broccoli, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, isitshalo seqanda, upelepele wensimbi, i-zucchini, ugalikhi, i-beetroot,
Izithelo: ama-apula, ihalananda, ubhanana, ukwatapheya, amagilebhisi, i-Persimmon, i-grapefruit, i-kiwi, i-raspberry,
Izinhlanzi Ezinamafutha (Iqukethe i-Omega 3)
Amafutha omnqumo omnqumo futhi ahlanganisiwe,
Amantongomane: ama-alimondi, ama-hazelnuts, ama-walnuts,
Imikhiqizo yobisi olu-Sour: i-cottage shizi, i-kefir,
Izithelo ezomile: ama-apricots omisiwe, izinsuku,
Iwayini elibomvu (kumithamo emincane),
Amagatsha esinkwa ufulawa
I-Durum kakolweni pasta,
Itiye eliluhlaza nekhofi.
Imifino nezithelo ziyinto esemqoka yemenyu ye-cholesterol ephezulu. Zingadliwa ngamanani acishe angenamkhawulo nganoma yisiphi isikhathi sosuku. Ubhontshisi ulapheka ikakhulukazi, ikakhulukazi ubhontshisi nge-cholesterol ephezulu. Ubhontshisi ucebile ngamaprotheni wemifino amuncwa ngokuphelele emzimbeni wethu. Ingxubevange yamaminerali namavithamini kusiza ukunciphisa amazinga e-lipid. Ubhontshisi uqukethe i-lecithin enempilo. Le nto enamafutha njengomphumela we-hepatoprotective, ngamanye amazwi, ivimbela ukuvela kwezifo zesibindi.
Amasaladi ane-cholesterol ephezulu kufanele adliwe nsuku zonke. Isaladi yemifino ekhanyayo eyenziwe nge-avocado, ulethisi, utamatisi kanye namakhukhamba iqukethe isamba esikhulu semifino yemifino, esheshisa imetabolism kanye nokuqothula kwezinto eziyingozi.
Izinhlanzi ezinamafutha, ikakhulukazi i-salmon, zakhiwa ngama-asidi angenawo amafutha. Babambe iqhaza ngqo ku-normalization ye-lipid metabolism. Kungcono ukubhaka inhlanzi, okufakwe kancane ngamakha akho owathandayo futhi kufafazwe ngamafutha omnqumo. Nge-cholesterol ephakeme, kungcono ukungadli ukudla okuthosiwe, ngoba izinto ze-carcinogenic zikhishwa emafutheni emifino lapho zithosiwe.
I-Durum kakolweni pasta inezici ezilandelayo ezizuzisayo:
Banika umzimba okubizwa ngokuthi “kancane” kilojoule umuzwa ohlala njalo wokuthamba,
Abanayo i-carbohydrate “esheshayo”, ebangela ukukhuluphala,
Ubuningi befayibha yokudla,
Landelela izinto namavithamini.
Ipasta ayinawo amanoni. Ngakho-ke, zingadliwa ngabantu abane-cholesterol ephezulu. Ukuletha izinzuzo eziphezulu emzimbeni, ungafaki ibhotela esitsheni se-pasta. Futhi kuyanconywa ukupheka i-pasta al dente, okuhunyushwa ngayo kusuka kwelesiNtaliyane ngokuthi "ngezinyo". Kukule fomu ukuthi bagcina inani elikhulu kakhulu lezinto ezibalulekile.
Ukwenza i-vinaigrette yasendulo ibe lusizo kakhulu odongeni lomkhumbi, sebenzisa i-oyili yeminqumo yokugqoka, ungene esikhundleni sokukhipha okufakwayo okusha, kanye nopende ongabanjwanga nge-capicum entsha. Kukhona ukuhlukahluka okunjalo akukho okwehla esiphundu, ngenkathi kunomphumela we-anti-atherogenic. Ungangeza futhi ugarlic ukuze ubambe iqhaza futhi uzuze. Uma kukhona i-clove yalesi sitshalo njalo, umphumela wokwehlisa izinga le-cholesterol "embi" nokushesha kwezinqubo ze-metabolic uyaboniswa.
ISorrel Inesilinganiso esikhulu se-potassium ne-vithamini C. Ukusebenzisana kwabo emzimbeni kufaka isandla ku-normalization ye-lipid metabolism egazini. Lesi sitshalo sisetshenziswa kabanzi ekuphekeni futhi singakhipha izinhlobo zokudla. Amahlamvu weSorrel angadliwa womabili kuma-saladi nakusobho.
Ulwandle kale kunezitolo eziningi. Le alga inokwakheka kwamakhemikhali ama-sitosterols, avimbela ukulungiswa kwamachibi e-cholesterol odongeni lwe-vascular. Futhi amavithamini B12 kanye ne-PP yokulwa ne-thrombosis. I-Kelp seaweed edliwayo ingadliwa njengesitsha esehlukile, noma njengesitsha eseceleni esilinganayo, ngokwesibonelo, ukudoba.
Isifinyezo setafula lemikhiqizo eyingozi futhi enempilo ku-cholesterol ephezulu
Leli thebula liveza imikhiqizo ngamaqembu: inyama nenkukhu, ubisi, inhlanzi, amaqanda, okusanhlamvu, imikhiqizo yokubhaka, amaswidi, amafutha namafutha, ukudla kwasolwandle, amafutha kanye no-oyela, ukuthosa, iziphuzo. Ngaphakathi kwendawo ngayinye, kunemikhiqizo okufanele wenqabe, kepha kukhona imikhiqizo ezoba wusizo ku-cholesterol ephezulu. Ngakho-ke funda ngokucophelela futhi uqiniseke ukuthi uligcina leli khasi emabhukumaka akho ukuze ungalahlekelwa.
I-TOP 5 ivinjelwe ukudla
Ngokuvamile kunzima kakhulu ukuyeka ngokushesha yonke imikhuba yokudla elimazayo. Ukuze uqale uhambo lwakho lokususa i-cholesterol ephezulu, qale unake izinhlobo ezinhlanu zokudla eziyingozi kunazo zonke. Ngezansi sizohlola kabanzi ukuthi kungani ngempela lokhu kudla kungadliwa ngokwezigaba uma kutholakale ukuthi une-hyperlipidemia.
1. Inyama ebhemayo, amasoseji nososeji
Nge-cholesterol ephezulu, ukudla okubhemayo kunconywa kakhulu ukuthi kungadli. Isizathu salokhu ukukhishwa kwama-carcinogen inqubo yokubhema. Inyama ebhemayo nayo iphezulu kilojoule futhi iphakeme ku-cholesterol. Imikhiqizo enjalo ifaka umthwalo esiswini futhi isebenzisa izinsiza zamandla omzimba ekugayeni isikhathi eside emgodini wokugaya ukudla.
2. Ukubhaka ibhotela (amakhukhi, amakhekhe, amakhekhe)
Ukubhaka ibhotela, njengamaqebelengwane ekhilimu, ngokwesiko kuqukethe amaqanda, ibhotela no imajarini kuresiphi. Kulokhu, ukusetshenziswa kwalawa maswidi kunethonya elimazayo esimweni se-lipid. Amazinga aphansi we-lipoprotein aphansi ayanda, ngenkathi ama-lipoprotein aphezulu kakhulu ancipha ekujikelezeni kwegazi.
Inani likashukela elikhudlwana elisetshenziselwa ukwenza amaswidi amnandi libhebhethekisa ingozi yezifo ezibangelwa yi-atherosulinosis ezinjengesifo sikashukela. Kungcono ukudla izithelo ezimnandi, uju, amaswidi asempumalanga njengenye indlela.
3. Crispy Ungadla (chips, ama-crackers, ama-crackers)
Amafutha esundu asetshenziswa ekwenziweni kwezidlakudla ze-crispy. Futhi, le mikhiqizo iqukethe usawoti owedlulele. Chips kanye nama-crackers aqukethe amafutha amabi, elinye igama lamafutha we-trans. Amafutha esundu aqukethe i-Palmitic acid, ethuthukisa ukwakheka kwe-cholesterol endo native emzimbeni.
Le nto icasule ngokwenzeka kwe-hyperlipidemia. Amafutha e-Trans avale umzimba womuntu futhi abe nesandla ezifweni zenhliziyo ezi-coronary. Futhi, ama-chip kanye nama-crackers anokuqukethwe kwekhalori okuphezulu. Kulokhu, ngemuva kokudla, kunomuzwa wendlala futhi kukhona ukuntuleka kwamandla emzimbeni. Ukudla ukudla okulula futhi kuyingozi ngenxa yokoma ngokweqile.
Ukudla okusheshayo akufanele kudliwe nge-cholesterol ephezulu. Ukudla okusheshayo kubizwa nangokuthi "amakhalori angenalutho." Lezi sandwich ezihehayo zilayisha isisu namathumbu ngezinto ezinamafutha nezilimazayo, ngenkathi zinikeza amandla amancane okuphila. Futhi, ezindaweni ezisheshayo zokudla, imvamisa kwakusetshenziswa amafutha engulube ukuthosa. Imikhiqizo eminingi iqandisiwe isikhathi eside ngaphambi kokupheka, yingakho izakhi zomzimba kuzo zingekho ngokuphelele.
Ukusetshenziswa njalo kokudla okusheshayo kwandisa ingozi ye-atherossteosis, kwandisa ukugcwala kwama-lipid ayingozi egazini. Ngaso leso sikhathi kuvusa ukuqunjelwa futhi kubambezele ukuqedwa kwezinto ezilimazayo, amafutha ngokweqile avela emzimbeni.
5. Ukudla okuthosiwe
Amaqanda athosiwe kanye no-fries waseFrance ongadla nge-cholesterol ephezulu kungcono ukuthi ungafanele. Kanye nobhekeni othosiwe wokudla kwasekuseni. Lokhu kudla kuqukethe inani elikhulu le-cholesterol. Isibonelo, ama-139 mg we-cholesterol akhona ku-yolk yeqanda elilodwa. Ngokuthosa okuqinile, okuqukethwe kwamafutha kwemikhiqizo kuyanda, okuqukethwe kwezakhi kuyancipha. Ngasikhathi sinye, inqubo yokufakelwa emgodini wamathumbu ithatha isikhathi esiningi futhi iletha ukungakhululeki.
Ngokuthosa ama-fries, i-lard ivame ukusetshenziselwa ukuthuthukisa ukunambitheka kanye nokuthambisa. Kusukela ekusetshenzisweni kwamazambane anjalo, zombili isimo se-lipid somuntu nezinye izitho zithinteka kakhulu.
Ukudla okuthosiwe kubhekwa njengokuhle ngokwengeziwe, ngoba akukho mafutha adingekayo. Ngasikhathi sinye, lolu hlobo lokwelashwa okushisa lusiza ekugcineni amavithamini kanye namaminerali, kanye nokujula komkhiqizo. Ukudla imifino eyosiwe nakho kuyasiza.
Uhlu lwemikhiqizo eyingozi ku-hyperlipidemia luyamangaza impela. Ngaso leso sikhathi, kunenani elanele lemikhiqizo elwa nama-atherogenic yokudla okulinganiselayo. Udinga ukusondela ngobuhlakani ekuthuthukisweni kwemenyu efanelekile, ngenkathi uthathela ingqalelo izici zomzimba wakho.
Izimbangela kanye nemiphumela cholesterol ephezulu
I-cholesterol ephakanyisiwe kubantu ibonwa lapho ivezwa izici eziningi. Ezimweni eziningi, kutholakala kubantu abanesifo sikashukela. Inqubo ye-pathological ingabonakala nge:
Lesi sifo singatholakala kwabesifazane ngesikhathi sokukhulelwa. Uma umzimba ungenayo i-hormone yokukhula, khona-ke lokhu kuba imbangela yalesi sifo. Ngokuphuza okungenangqondo kwezidakamizwa ezithile, i-metabolism iyaphazamiseka, okuholela ekwandeni kwe-cholesterol. Engcupheni ngabantu abavame ukuba nezimo ezicindezelayo. Lesi sifo singatholakala kwiziguli ezikhuluphele. Uma umuntu ebhema noma esebenzisa kabi utshwala, lokhu kuholela ekuthuthukisweni kwenqubo ye-pathological.
Ngokulashwa okungafanele kwe-pathology kumuntu, ukuthuthukiswa kwezinkinga kuyatholakala. Imvamisa kakhulu ibonakala ngesifo senhliziyo noma isifo sokuhamba kwegazi ekuhambeni kwegazi kwemithambo yezingalo nemilenze. Ezinye iziguli zitholakala zinokuphazamiseka ekunikezelweni kwegazi ezinso, ebuchosheni. Ngokukhuphuka kwe-cholesterol, i-dyscirculatory encephalopathy iyatholakala. I-Pathology ingadala i-angina pectoris.
Ukunyuka kwesibalo se-cholesterol emzimbeni womuntu kungabonakala ngemuva kwezizinda zezimbangela ezahlukahlukene futhi kugcwele imiphumela. Kungakho kunconyelwa ukwelapha ngesikhathi isifo, okungenye yezingxenye zazo okuwukudla.
Imithetho eyisisekelo yokudla
Nge-hypercholinemia, isiguli asidingi ukunamathela ekudleni okuqinile impilo yakhe yonke. Iziguli zinconyelwa umsoco ofanele, ovumela ukusetshenziswa kwezinhlobonhlobo zokudla. Ukudla okukhuphukile kudinga ukwenziwa kwemithetho ethile:
Isiguli sikhonjiswa ukudla okwondlekile. Lokho wukuthi, umuntu kufanele adle ukudla izikhathi ezingama-5-6 ngosuku. Ngaso leso sikhathi, ama-servings kufanele abe mancane.
Isiguli kufanele sazi ukuthi yimiphi imikhiqizo engadingeki, silandele indlela yokudla ngokuqinile nezincomo. Ungadli amasoseji, imikhiqizo eseqediwe, imikhiqizo yenyama elungiselelwe, amasoseji, njll.
Uma ulandela ukudla, umuntu kufanele aqaphe okuqukethwe kwekhalori, okuzokwenza isisindo sibe ngokwejwayelekile.
Inani lamafutha asetshenzisiwe anconyelwa ukukhawulelwa ku-1/3. Amafutha ezilwane anqatshelwe ngokuphelele. Esikhundleni samafutha emifino, ahlanganisa ama-linseed, ummbila, i-sesame, i-olive, njll. Ngosizo lwabo, ukugqoka amasaladi.
Ukudla okuthosiwe akunconyelwe iziguli, ngoba kuholela ekwandeni kwe-cholesterol ye-atherogenic egazini.
Iziguli zivunyelwe ukudla imikhiqizo yobisi ngenani elincane lamafutha.
Ekudleni, kufanele kube nezinhlanzi zasemfuleni nezasolwandle. Inamafutha enziwe nge-polyunsaturated, enikeza ukuhlanzisisa okuphelele kwemithambo yegazi. Kwisonto lonke udinga ukudla okungenani kwezikhathi ezintathu zokudla kwezinhlanzi.
Umuntu kufanele wenqabe ingulube. Unconywe ukudla inyama ebusayo - iwundlu, inyama yenkomo, inyama yomvundla. Kunconywa ukudla izitsha zenyama kungabi ngaphezu kwezi-3 ngeviki.
Ukusetshenziswa kobhiya nemimoya akuvunyelwe ngokuphelele. Ezimweni ezingavamile, kuvunyelwe newayini elibomvu elomile, kepha alikho ngaphezu kwengilazi eyi-1.
Iziguli ziyelulekwa ukuba zidle ifilidi yenkukhu, ngoba ayigcini nje ngokuncika, kodwa futhi ifaka namaprotheni.
Akunconywa ukuphuza ikhofi nhlobo. Uma umuntu engakwazi ukwenqaba, ngakho-ke kuyadingeka ukuthi ungaphinde uphuze inkomishi engaphezu kweyodwa ngosuku ngalesi siphuzo.
Nge-cholesterol ephezulu, kunconywa ukusetshenziswa komdlalo, ngoba le nyama iqukethe amafutha amancane.
Ukudla kufanele kuthuthukiswe kususelwa kwimifino nezithelo. Kufanele zidliwe nsuku zonke okungenani ama-500 amagremu. Ukusetshenziswa kwazo kufanele kwenziwe okusha, kubhakwe noma kubilisiwe.
Ukudla kufanele kuthuthukiswe ngesisekelo samabele, ngoba ukwakheka kwawo ngamanani amakhulu kufaka imicu yama-coarse emunca i-cholesterol.
Ngokwenyuka kwesilinganiso se-cholesterol, umuntu kufanele alandele ngqo imithetho engenhla, ezohlinzeka hhayi kuphela ukuqina kwesikhombisi, kepha futhi nokwenza ngcono isimo sesiguli.
Yikuphi ukudla okufanele kungafakwa ekudleni?
Nge-cholesterol ephezulu, ekudleni kufanele kuthuthukiswe kucatshangelwa ukudla okungavunyelwe. Iziguli zenqatshelwe ngokuphelele ukuthi zidle amafutha avela ezilwaneni, ngoba zingumthombo we-cholesterol. Ukubanjwa kwama-carbohydrate angagayeki kalula akunconywa. Iziguli zenqatshelwe ekudleni ukudla okuholela ekuxashweni kohlelo lwezinhliziyo nolwezinzwa.
Ukusetshenziswa kwemifino kufanele kwenziwe ngendlela ebilisiwe, ngoba lapho fiber eluhlaza ingena emzimbeni, i-flatulence iyabonakala. Ukudla ukudla kufanele kwenziwe ngendlela ebilisiwe noma ebhakwe. Ukubamba kuyanconywa futhi. Amafutha - imikhiqizo yobisi ayivunyelwe ezigulini: i-kefir, ubisi olubilisiwe olubunjiwe, iyogathi, njll. Imayonnaise, ukhilimu kanye nososo ukhilimu omuncu kufanele kulahlwe.
Kwi-pathology, kubalulekile ukukhipha amaqanda athosiwe futhi abilisiwe ekudleni. Ngesikhathi sokulungiswa kwezifundo zokuqala, kwenqatshelwe ukusebenzisa umhluzi onamafutha amaningi. Izinhlanzi ezinamafutha nenyama kungakhuphula ukusebenza. Ochwepheshe abancomi ukusetshenziswa kwe-confectionery. Ekudleni, kuyadingeka ukushiya imifino ethosiwe, ukhukhunathi. Ukudla okuvinjelwe kungamadada ne-goose. Esikhundleni salokho, okusanhlamvu kungasetshenziswa. Kunconywa ukusebenzisa izitsha ze-oatmeal, iphalishi kusuka elayisi, i-buckwheat, njll.
Lapho ulungiselela ukudla, kuyadingeka ukuthi uzijwayeze nohlu lokudla okungavunyelwe, okuzobeka umkhawulo amathuba okuwohloka kwesimo seziguli.
Ithebula lemikhiqizo leKholesterol
Uma umuntu ene-cholesterol ephezulu, lokho kungakhombisa itafula. Iziguli ziyelulekwa ukuba zenqabe imikhiqizo elandelayo - i-lard, inyama, amafutha, njll. Yikuphi ukudla okungenakudliwa kuchazwe kukholamu yokuqala. Baphawuleka ngenani eliphakeme kakhulu le-cholesterol ekwakhiweni kwabo. Nge-cholesterol ephansi yegazi, ukusetshenziswa kwemikhiqizo kusuka kukholamu yesibili ngenani elincane kuvunyelwe.
Kunqatshelwe impela Okuvunyelwe
Inhlanzi ethosiwe Amakati
Imikhiqizo eseqediwe Isobho lezinhlanzi
Inyama yengulube IWundlu
Gusyatina Lean yenkomo
Lapho wenza ukudla, kubalulekile ukunquma ukuthi yikuphi ukudla okuvinjelwe, ngoba kufaka inani elikhulu kakhulu lale ngxenye. Uma benqatshelwe, lokhu kusho ukuthi bangalimaza umzimba.
Ngesikhathi senqubo ye-pathological, khetha ukudla okungenayo i-cholesterol. Kuthuthukiswa ngokuya ngemikhiqizo ethile. Ukuhlinzekelwa komuntu kufanele kube nesinkwa izolo, kulungiselelwa ukuthi kusetshenziselwa ufulawa omncane. Ungasidla nesinkwa esomisiwe. Ukuze unciphise ukusebenza, kunconywa ukupheka i-pasta kusuka kufulawa we-wholemeal. Iziguli ziyelulekwa ukuba zipheke zisebenzisa uwoyela wemifino. Ukudla kufanele kube nemifino:
Ikholifulawa neklabishi emhlophe,
Ukuqedwa kobuthi emzimbeni wenziwa kusetshenziswa izaqathi. Umthombo we-folic acid isaladi. Ochwepheshe batusa ukunika ukuthanda inyama ebolayo - i-veal, turkey, inyama ebomvu, unogwaja, inkukhu, njll.
Ukudla kufanele kuthuthukiswe ngesisekelo sokudla kwasolwandle - ama-mussels, ama-scallops, ama-oyster, imiqhele ngamanani amancane. Kuyadingeka ukusebenzisa ukudla okwehlisa i-cholesterol - tuna, cod, haddock, flounder, pollock, njll.Umthombo wamaprotheni wemifino, okudingeka kulesi sifo, yizinzalo. Iziguli zidinga ukudla amantongomane.
Kunobubanzi bemikhiqizo evunyelwe nge-cholesterol ephezulu, ekuvumela ukuthi wakhe imenyu emnandi futhi enempilo.
Ukudla okune-cholesterol ephezulu kufanele kuthuthukiswe kususelwa kumikhiqizo enganciphisa izinkomba.
Le ngxenye kufanele ibe nemikhiqizo yobisi olunobisi olunamafutha amancane. Ukuvikelwa kwezindonga ze-vascular, kanye nokususwa kwama-calcareous deposits namafutha emzimbeni, kunikezwa nge-anyanisi negalikhi. Isiguli kufanele siphuze amajusi e-citrus, afaka i-ascorbic acid, isenzo sawo sihlose ukuqinisa izindonga zemithambo yegazi. Kunconywa futhi ukuphuza izithelo ezidliwayo, umhluzi we-rosehip, itiye elikhiqizwe eliphansi. Ukusuka kokuthosa, udinga ukunakekela izinongo, upelepele, ulamula, lwesinaphi, i-horseradish.
Iziguli zidinga ukudla utamatisi namakhukhamba. Futhi, iziguli kufanele zidle imifino ngobukhulu obukhulu. Ama-snacks, ama-kiwi nama-savory crackers anconyiwe. Ukulungiselela izobho zemifino kufanele kwenziwe kwi-inyama yesibili yomhluzi. Ngamaswidi, ukusetshenziswa kwama-popsicles namajellies kuvunyelwe. Ungadla nemikhiqizo engafaki ushukela.
Lapho ukhetha imikhiqizo yokudla, kuyadingeka ukuthi unikeze okuthandwa yilezo zinketho ezingafaki i-cholesterol. Uhlu luqukethe noma yimiphi imikhiqizo yezitshalo:
Kuyadingeka ukudla okusanhlamvu okusanhlamvu, ukuze kulungiselelwe lapho kunqatshelwe ukusebenzisa ubisi nebhotela. Iziguli kufanele zidle izobho zemifino nsuku zonke. Ukuphaka kuqukethe owoyela bemifino, amantongomane nembewu, okufanele kudliwe ngobuningi.
Isiguli kufanele sidle i-broccoli, efaka nokudla i-fiber, esiza ekuqiniseni isimo. Ukudla okuhlanganisiwe kwe-fiber akunakungenwa udonga lwamathumbu. Ngosizo lwayo, ukuhlanganiswa nokuqedwa kokudla okuhleliwe kunikezwa. Ngenxa yokwanda kwe-peristalsis, kunikezwa inqubo encane yokufakwa kwe-cholesterol. Iziguli zinconywa ukuthi zidle nsuku zonke amagremu angama-400 alo mkhiqizo.
Ungayeki amakhowe e-oyster, akhiwa ama-statin. Ziyakwazi ukuqondana nezidakamizwa, eziqinisekisa ukwehla kokuhlanganiswa kwe-cholesterol. Ngokusetshenziswa njalo kwalo mkhiqizo, kungenzeka ukwakheka kobumba emikhunjini kuncishisiwe. Ngesikhathi senqubo ye-pathological, isiguli sinconywa ukusebenzisa okungenani amagremu ayisishiyagalombili womkhiqizo.
Ochwepheshe batusa ukufakwa kwe-herring ekudleni. Lo mkhiqizo uqukethe ama-omega-3 fatty acids. Ngosizo lwabo, cholesterol iyancipha uma isilinganiso sabaphethe amaprotheni sishintsha. Umuntu kunconyelwa ukuthi kudliwe nsuku zonke amagremu ayi-100 alo mkhiqizo. Lokhu kuzokwenza ukuthi kubuyiswe i-lumen emikhunjini, kanye nokususa amanoni ne-cholesterol kusuka kuma-plaque.
Uma i-cholesterol inyuke, lokho okudliwayo kunqunywa kuphela ngudokotela ngokuhambisana nobunzima benqubo ye-pathological.
Ukudla kwe-cholesterol ephezulu kuyathuthukiswa kucatshangelwa uhlu lokudla okuvunyelwe nolungavunyelwe. Kunezindlela eziningi zokudla. Yikuphi okufanele kakhulu kunganqunywa udokotela kuphela. Ukusuka ku-cholesterol ephezulu, kunconywa ukusebenzisa lokhu okulandelayo kokudla:
Ukudla kwasekuseni kuqukethe i-yogurt enamafutha aphansi kanye ne-chinangwa okusanhlamvu. Ukuze uqede ukwanda kwezinkomba, kunconywa ukuphuza ingilazi yejusi yamagilebhisi ngalesi sikhathi. Kwasemini, kunconywa ukuthi ulungiselele isaladi yemifino bese uphuza ujusi we-apula omusha. Kwasemini, kunconyelwa ukupheka i-borsch nokusetshenziswa komhluzi wemifino, inyama ebilisiwe. Ungadla isaladi yemifino, egcwaliswa ngamafutha omnqumo. Isidlakela santambama siqukethe izinkwa ezimbili ze-bran ne-apula. Ukudla okunempilo kudinga ukupheka isidlo sakusihlwa ngendlela yobhontshisi we-asparagus abilisiwe ngokufakwa kukawoyela wombila. Kunconyiwe futhi ukusetshenziswa kwe ushizi, imiqulu yesinkwa netiye eliluhlaza.
Kulokhu, lokhu kudla kwehluka kakhulu. I-omelet ilungiselelwe isidlo sasekuseni, esenezelwa nge-bell pepper ne-zucchini. Ngalesi sikhathi, kunconywa ukudla isinkwa se-rye futhi uphuze ingilazi yekofi ngokufakwa kobisi. Ukudla kwasekuseni kwesibili kuqukethe isaladi yezithelo nesinkwa se-bran. Kwasemini, kunconywa ukulungiselela isobho semifino, i-zander ebhakwe. Ungadla futhi isaladi lemifino elincane, ngoba kulungiselelwe ukuthi kusetshenziselwa i-oyseed oil. Ukusuka ekuphuzeni, udinga ukunikela ukukhetha ku-compote. Isidlakela santambama siqukethe iyogathi enamafutha aphansi. Ngokudla kwakusihlwa, ungenza isaladi usebenzisa ushizi ongafakwanga bese udla isinkwa. Ijusi yetamatisi iyanconywa ukuphuza.
Itafula lokuphathwa nge-cholesterol ephezulu idinga ukulungiswa kwephalishi likakhokho emanzini. Ungaphuza futhi ingilazi yejamu le-plum noma itiye eliluhlaza. Ukudla kwasekuseni kwesibili kuqukethe i-orange noma i-mandarin. Ukudla kwasemini, pheka isifuba senkukhu nelayisi emanzini. Ungadla isaladi, lapho kulungiswa iklabishi kanye nezaqathi esetshenzisiwe. Ukudla kugezwa ngomhluzi we-rosehip. Ukuze uthole isidlo sasemini phakathi kwamabili, kunconywa ukusebenzisa isaladi yemifino ne-bran, lapho kusetshenziselwa khona i-olive yamafutha. Ukusuka ekuphuzeni, i-yogurt iyanconywa. Isidlo sasemini siqukethe inhlanzi ebhakwe ku-foil, isaladi yemifino egcotshwe uwoyela we-corn nejusi.
Zonke lezi zinsuku ezingenhla zingaphindwa noma zihlanganiswe. Lokhu kuzokwehluka kakhulu imenyu yesiguli. Ngenxa yokusetshenziswa kwetafula lokwelashwa nge-cholesterol ephakeme, kungenzeka ukuguqula izinkomba njengokujwayelekile ngaphandle kokusebenzisa izidakamizwa. Ngosizo lokudla, izitsha ziyahlanzwa futhi ukugeleza kwegazi kuzo kuzothuthukiswe.
Kunezinombolo eziningi zokupheka okumnandi ezivunyelwe ukuzisebenzisa nge-cholesterol ephezulu. Iziguli zelulekwa ukuthi zilungiselele:
Inhlanzi ebhakwe. Ama-clove ambalwa kagalikhi no-anyanisi owodwa abunjiwe futhi aqunywe. Nge-zucchini ne-isitshalo seqanda, kufanele wenze ukukhohlisa okufanayo. Imifino ixubene futhi ifakwe usawoti, upelepele, amakhambi weProvence namafutha yemifino isigamu sehora. I-fillet yezinhlanzi zasolwandle i-o ile i-oyela futhi ifakwa ngamakhambi. Imifino ibekwa ocwebeni, bese kuba nezinhlanzi, namasongo katamatisi ngaphezulu. Izinhlanzi ezibhakiwe kuhhavini imizuzu engama-20.
Inhlanzi noshizi. Isitsha silungiswa ngesisekelo se-hake fillet, utamatisi, u-anyanisi, izaqathe, ushizi onamafutha aphansi, uwoyela wemifino. I-fillet yezinhlanzi isikwa ibe izingxenye futhi ifakwe emanzini anosawoti. Kulokhu, ama-allspice nezinongo asetshenziswa. U-anyanisi oqoshiwe futhi wasongwa epanini. Izaqathi zangaphambi kashizi zengezwa lapha. UFillet ubekwa eluswini futhi ugcotshwa ngemifino ethosiwe. Utamatisi ubekwe phezulu, okufanele usikwe emasongweni. Isitsha sibhakwa imizuzu engama-20. Ngemuva kwalesi sikhathi, inhlanzi kufanele ichotshozwe ngoshizi we-grated bese ibhaka imizuzu embalwa.
I-fillet yenkukhu enobhontshisi. I-fillet eyodwa yenkukhu iyathathwa bese isikwa ibe yizingcezu ezincane. Kufanele zibekwe epanini, uthele amanzi bese ukhipha. Amagremu angama-300 kabhontshisi aluhlaza afakiwe afakwe ku-stewpan, kanye nezinongo ngokuya ngokuthandwa ngabantu. Stew yonke into ngaphansi kwesivalo kuze kube inkukhu ifinyelela ukulungela. Ngaphambi kokukhonza, isitsha sifafazwa ngamakhambi, usawoti bese uthelwa ngamafutha omnqumo. Khonza indishi ifudumele.
Ibele elibhakwe. I-fillet fillet kumele ishaywe kancane. Ngemuva kwalokhu, i-marinade esekwe emafutheni yemifino iyalungiswa. Garlic, irosemary nobisi lwe-skim kuyanezelwa kukho. UFillet ucwiliswa ku-marinade futhi ushiywe imizuzu engama-30. Ngemuva kwalokhu, i-filet ibekwa efomini bese ibhakwa kuhhavini. Ngemuva kokupheka, udinga usawoti bese ukhonza ngemifino emisha.
Ukwanda kwe-cholesterol yegazi kutholakala kubantu uma bevezwa izinto ezahlukahlukene ezithusayo. Le nqubo ye-pathological ingaholela ezinkingeni ezinkulu, ezidinga ukwelashwa okufika ngesikhathi. Kulokhu, isiguli kufanele sinamathele ekudleni kucatshangelwa imikhiqizo evunyelwe neyenqatshelwe. Kunezinhlobonhlobo zokudla, okukuvumela ukuthi ukhethe inketho efaneleke kakhulu yeziguli. Ukuze uqinisekise ukwelashwa okusebenzayo nokunempilo, kuyadingeka ukuthi udokotela abambe iqhaza ekwakhiweni kokudla.
Izici zomsoco ku-hypercholesterolemia
Ukudla okunempilo. Umgomo oyisisekelo - kukhona ngisho nalapho ungafuni, kodwa ngezingxenye ezincane (100-200 g), izikhathi ezi-5-6 ngosuku.
Ukulula ukupheka. Nge-cholesterol ephezulu, othosiwe, obhemayo, nezitsha ezifakwe emanzini anosawoti, noma yikuphi ukulondolozwa akuvunyelwe ngokuphelele.
Ibhulakufesi. Kufanele ibe nama-carbohydrate - okusanhlamvu okubilisiwe emanzini noma kubisi olungenawo fat.
Isidlo sasemini Kufanele ufake isobho noma umhluzi kanye nokushisayo, ngokwesibonelo, inhlanzi ebilisiwe noma inyama enedishini eliseceleni.
Ukudla kwakusihlwa Okuthandwayo kufanele kunikezwe amasaladi, imifino enenhlanzi noma inyama.
Itiye lesidlo sasemini nelasemini. Njengokudla okulula, amasaladi ezithelo, izithelo, imifino emisha, izithelo ezomisiwe, amantongomane, imikhiqizo yobisi olunosawoti ilungile.
Ihora eli-1 ngaphambi kokulala, kunconywa ukuphuza ingilazi ye-kefir, iyogathi yemvelo noma ijusi yemifino elisanda kulungiswa.
Cishe amalitha amanzi ayi-1-1,5 kufanele aphuzwe ngosuku. Akunakwenzeka ukuyifaka itiye, ama-compotes, ama-decoctions amakhambi.
Kubaluleke kakhulu ukunciphisa ukunciphisa ukudla kwamafutha ezilwane okungenani okwesithathu.
Kungcono ukwala ikhofi ngokuphelele. Noma ungaphuzi inkomishi engaphezu kweyodwa ngosuku lokuphuza isiphuzo semvelo. Itiye le-ginger linomphumela omuhle we-tonic. Lokhu kungenye indlela enhle yokuqinisa amandla, kepha elimaza ikofi ephezulu ye-cholesterol.
Lapho kuhlanganiswa ukudla, abesifazane bayalulekwa ukuthi bangenise imikhiqizo eminingi ye-soy equkethe ama-phytoestrogen kwimenyu, basebenzise okusanhlamvu okusimile kaningi, baphuze iziphuzo zemvelo ezengeziwe. Kuyalulekwa ukuthi kunciphise ukuthathwa ushukela, ukuhambisa okuningi.
Abesilisa kufanele baqaphe ngokucophelela ukugcwaliswa kabusha kwamaprotheni, badle ama-legumes nezinhlanzi ngaphezulu, benqabe usawoti noma babeke inani labo ku-8 g ngosuku. Kanye nokudla okufanele, kungakuhle ukulahla ngokuphelele imikhuba emibi (ukubhema, uphuzo oludakayo).
Imvamisa, i-hypercholesterolemia ihlanganiswa ne-pathologies yezitho zangaphakathi: ushukela wegazi ophakeme, ukusebenza kahle kwe-gland yegland, isibindi nezinso. Lesi simo sidinga indlela ekhethekile.
Ithebula lokudla okunconyiwe nokuvinjelwe kwe-cholesterol ephezulu
Izinhlanzi nezinhlanzi zasolwandle
Akunakudliwa izikhathi ezingaphezu kwezingu-2 ngesonto, ngesimo abilisiwe, ezingxenyeni ezincane ezingaba ngu-100 g.
izinhlanzi ezikheniwe kanye nemikhiqizo eseqedile.
inkukhu engenasikhumba nenhlwathi,
Kwethulwa kumenyu, ezingxenyeni ezingekho ngaphezu kwe-100 g, zonke ezinye izinsuku.
imikhiqizo yenyama engaqediwe (amasoseji, izimpahla ezikheniwe, amasoseji),
Faka ekudleni okulungiselelwe. I-2 2 tbsp. l ngosuku.
ibhotela, uwoyela wesundu,
Ubisi, imikhiqizo yobisi
Okuqukethwe kwamafutha kusuka ku-0,5 kuye ku-5%.
ushizi ofinyelela kuma-20% amafutha,
ukhilimu omuncu kuze kufike ku-15% wamafutha.
Izikhathi ezingekho ngaphezu kwezi-3 ngesonto.
okunamafutha obisi lwasekhaya:
Imifino emisha nebandayo, ummbila, ubhontshisi, udali. Amazambane abilisiwe isikhathi esingaphezu kwezi-3 ngesonto.
Noma yisiphi isithelo esisha. Izithelo ezomisiwe zinconywa ukuba zidliwe zonke ezinye izinsuku.
amagilebhisi aluhlaza aluhlaza
isinkwa esenziwe rye noma ufulawa wokusanhlamvu okuphelele - zonke izinsuku, kepha hhayi ngaphezulu kwe-200 g,
i-durum kakolweni pasta - hhayi ngaphezu kwezikhathi ezi-4 ngeviki njengendawo yokudla yenyama,
i-buckwheat - kungabi ngaphezu kwezikhathi ezi-2 ngesonto, ezingxenyeni ezincane ze-100 g.
amakhukhi ahlala isikhathi eside (uMaria, Izinyo elimnandi).
Ungadla ucezu lwesinkwa esimhlophe noma amakhukhi angama-2-3 ebhulakufesi, kepha hhayi ngaphezulu kwezikhathi ezi-3 ngesonto.
buns kusuka khekhe puff.
I-Soy chocolate - hhayi ngaphezu kwezikhathi ezingama-4-6 ngenyanga.
okhalweni okhalweni nge-chamomile,
i-compote yezithelo eyomisiwe,
Kungcono ukufaka lezi ziphuzo kumenyu kungabi ngaphezu kwezikhathi ezi-3-4 ngesonto.
noma yiziphi iziphuzo ezingezwe ngobisi noma ukhilimu,
utshwala, iziphuzo ezinekhabhoni kakhulu.
Ukusebenza ngokuphelele kwezinhlelo nezitho zomzimba, umzimba womuntu kumele uthole amaprotheni, amafutha nama-carbohydrate nsuku zonke ngokudla. Ngakho-ke, ngisho nokugcwala okukhulu kwe-cholesterol egazini, akunakwenzeka ukuyeka ngokuphelele amafutha wezilwane.
Ziyizinto eziphakeme zamaseli e-organic ephezulu. Okuqukethe ama-alpha acid.
Inani elikhulu kakhulu lamaprotheni liqukethe:
Lapho uhlanganisa ukudla, kubalulekile ukubheka ukuthi okunye kwalokhu kudla kuqukethe inani eliphakeme le-cholesterol. Isibonelo, i-shrimp noma i-veal. Ngakho-ke, zingafakwa kwimenyu kungabi ngaphezu kwezikhathi ezi-2 ngesonto.
Amafutha angumthombo wamandla womzimba. Nge-cholesterol ephezulu, amafutha agcwele awafakwanga kwimenyu, engakhuphula izinga le-LDL elimazayo.
Okuncamelayo kufanele kunikezwe emifino, emafutheni angahlanganisiwe, aqukethe emikhiqizweni elandelayo:
ubisi, imikhiqizo yobisi.
Okuqaphelekile ikakhulukazi inhlanzi zolwandle. Uqukethe i-cholesterol eningi, kepha ayinangozi, ngoba umphumela wayo olimazayo ungathathi hlangothi ngamafutha acid angenakunyakaziswa. Ngakho-ke, ngaphezu kwemifino nezithelo, into eyisisekelo yokudla okunempilo izinhlanzi zolwandle. Ingafakwa kumenyu nsuku zonke.
Ama-carbohydrate ashukela alula futhi ayinkimbinkimbi, umthombo wamandla, into yokwakha amaseli. Ukuntuleka kwabo kuthinta ngokushesha isimo somzimba: uhlelo lwezinhliziyo luyaphazamiseka, isilinganiso se-metabolic sehla, isimo sezinzwa siyanda.
Inani elikhulu kakhulu lama-carbohydrate aqukethe ku:
isinkwa esiphelele sokusanhlamvu
imikhiqizo yobisi enamafutha amancane.
Kubalulekile ukwazi ukuthi kuneqembu elihlukile lama-carbohydrate, elibizwa ngokuthi licolisisiwe. Azenzi ngenxa yokuntuleka kwamandla emzimbeni, kodwa kunalokho ziqothula ngokuphelele ugcino lwamandla. Ama-carbohydrate acwengekile adonswa kalula.
Ngakho-ke athuthukiswe ngobuciko, engenazo ngokuphelele izimfanelo ezisebenzisekayo. Ngokweqile kwabo, baqala ukuguqula masinyane babe ngamafutha. Ukulandela ukudla kudla ngokuphelele ukudla okungenamsoco we-carbohydrate. Lokhu kufaka phakathi i-confectionery, i-khekhe, amaswidi, iziphuzo ezinekhabhoni.
Ongakudla futhi ongakwazi ukukudla nge-cholesterol ephezulu
Ukudla okwenziwe ngemitholampilo kufaka imikhiqizo eminingi ehlangana kahle nenye, ekuvumela ukuthi wenze ukudla kuhluka.
okusanhlamvu: ilayisi emnyama nebomvu, i-buckwheat, i-bulgur, i-quinoa, i-hercule, i-mzala,
izinhlanzi zasolwandle: i-tuna, i-hake, i-pollock, i-cod, i-salmon, i-whiting eluhlaza okwesibhakabhaka, i-hake,
izinsalela: ubhontshisi omhlophe nobomvu, udali, amaphuphu
amantongomane: umsedari, ama-walnuts, ama-hazelnuts, ama-alimondi, ama-cashews,
Amafutha emifino: umnqumo, ulayini, u-soy, i-sunflower engachazwanga,
ubisi, imikhiqizo yobisi ebilisiwe enokuqukethwe okunamafutha afika ku-5%: ubisi, iyogathi (ngaphandle kokunambitha, ukunambitheka kokunambitheka), ushizi wekhishi,
ama-khekhe: isinkwa esiphelele sokudla okusanhlamvu, amakhukhi we-oatmeal, ama-crackers, amabhisikidi,
soya, imikhiqizo evela kubo,
imifino: iparsley, dill, anyanisi wasentwasahlobo,
ama-dessert: ama-puddings, ama-jellies ezithelo, ama-ballet smoothie,
iziphuzo: itiye eliluhlaza kanye ne-ginger, izithelo zemvelo noma ijusi yemifino, ama-decoctions ngama-rose okhal, i-chamomile, iziphuzo zezithelo.
Imifino nezithelo kufanele kube yisisekelo sokudla. Zingadliwa zisanda kufakwa, eqandisiwe, zibilisiwe noma zithwelwe.
Ngokwesilinganiso esilinganiselwe, hhayi ngaphezulu kwezikhathi ezingama-2-3 ngesonto, kunconywa ukusebenzisa:
izinhlobo zezinhlanzi zasemfuleni, ukudla kwasolwandle: i-pike, i-perch, crabs, shrimps, mussels,
inyama yokudla: ifilimu lesifuba senkukhu, iturkey, unogwaja, i-leal veal,
imikhiqizo yobisi: ushizi onamafutha afinyelela ku-20%, ukhilimu omuncu - ufike ku-15%,
amazambane abunjiwe obisini,
izithelo ezomisiwe (ngaphandle kwamagilebhisi omisiwe),
durum kakolweni pasta,
iziphuzo: i-kissel, i-compote yezithelo eyomile, i-cocoa, iwayini elibomvu lemvelo.
Konke lokhu kudla okungenhla kuqukethe i-cholesterol. Ngakho-ke, udinga ukufaka kubo ekudleni okulinganiselwe. Ukweqisa kwabo kukhuphula inani lamafutha, kwandisa izinguquko ze-atherosulinotic emikhunjini.
noma uluphi uhlobo lwenyanya,
inyama enamafutha: ingulube, inyama yenkomo, iwundlu,
inyama, imikhiqizo enganqamuki enhlanzi, ukudla okusemathinini,
uwoyela, amafutha: ibhotela, isundu, uwoyela kakhukhunathi, isinqe, imajarini,
imikhiqizo yobisi: ubisi oluhlanganisiwe noma olwenziwe ekhaya, ukhilimu, ama-curds,
okusanhlamvu: semolina, ilayisi elimhlophe,
iziphuzo ezinekhabhoni kakhulu, iziphuzo ezithambile.
Ukunamathela kokudla okufanele kunganciphisa i-cholesterol kungakapheli izinyanga ezi-2.
Ngenxa yezakhiwo zabo, basiza ukunciphisa ngempumelelo ukuqoqwa kwama-lipoprotein ayingozi futhi bakhuphule inani labazuzayo. Okusebenzayo kakhulu kulokhu:
Amafutha omnqumo angaphezulu e-olive. Iwusizo kakhulu ku-cholesterol ephezulu. Umthombo wezitjalo zezitshalo. Ama-cholesterol asezingeni eliphelele ngo-13%.
I-Avocado Kuqukethe inani elikhulu kakhulu lama-phytosterols avela kuzo zonke izithelo. Lezi zinto zinciphisa amandla esibeletho esincane ukumunca izinhlayiya ezinamafutha, zisuse emzimbeni. Uma udla uhhafu we-avocado nsuku zonke ngebhulakufesi, ngemuva kwamaviki ama-3-4 ukuqoqwa kwe-cholesterol ephelele kuzokwehla ngo-8-10%, kepha kuncike kuphela emithethweni yokudla okunempilo.
I-Kiwi, ama-apula, i-blackcurrant, ikhabe. Ama-antioxidants wemvelo wangempela. Ngokwejwayelekile i-lipid metabolism, susa ama-free radicals. Ukwehlisa cholesterol ngo-5-7% lapho kudliwa izinyanga ezingama-2-3.
Ama-soya, ama-legumes acebile ku-fiber. Ihlanza kahle imithambo yegazi, ibopha ngokushesha ama-lipoprotein aphansi, iwasuse emzimbeni ngaphambi kokungena egazini elijwayelekile.
Ama-mangonberry, ama-cranberry, amapomegranati, ama-sitrobheli, ama-currants abomvu, ama-raspberries, amagilebhisi abomvu aphansi i-cholesterol ngo-15-18%. Amajikijolo acebile ngama-polyphenols. Bahlanza imithambo yegazi, bakhiphe izinto eziyingozi emzimbeni. Vimbela ukukhula komdlavuza, isifo sikashukela.
I-tuna, i-mackerel, i-cod, i-trout, i-salmon. Inhlanzi inamafutha acids (omega-3, omega-6). Balawula i-lipid metabolism, bahlanza imithambo yegazi yama-atherosulinotic plaque, futhi baqinise ulwelwesi lwamaseli. Kunconywa ukwethula izinhlanzi ekudleni nsuku zonke, ngenani elincane (100-200g). Ngemuva kwezinyanga ezingama-2-3, izinga lama-lipoprotein amahle lizonyuka ngo-5%, kubi - kwehle ngo-20%.
I-Flaxseed, okusanhlamvu, i-bran, i-oatmeal. Ziqukethe inani elikhulu lemicu yezitshalo ezihlanganayo ezisebenza njengama-sorbents: zidonsa izinhlayiya ezinjengamafutha, ubuthi, futhi zizisuse emzimbeni.
Igalikhi. Ibuyisela amandla i-lipid metabolism, yandisa ukwakheka kwe-HDL, ihlanza imithambo yegazi.
Uju, impova, isinkwa sezinyosi. Qinisa ukungatheleleki, yenza kube ngokwejwayelekile umfutho wegazi, uthuthukise izinqubo ze-metabolic, ubuyise imithambo eyonakele.
Zonke izinhlobo zemifino zicebile nge-lutein. Akhipha umzimba ubuthi, ubuthi, ama-lipoprotein ayingozi. Vikela ekuthuthukisweni kwe-atherosclerosis.
Izibonelo zemenyu yokudla ephansi ye-cholesterol
Ukudla okune-cholesterol ephezulu kuyasiza njenge-prophylaxis kubantu abakhuluphele, ngezifo zomgudu wokugaya ukudla, uhlelo lwenhliziyo.
ibhulakufesi - ushizi wekhishi, itiye eluhlaza,
isidlo sasemini - isaladi lezithelo, ujusi,
isidlo sasemini - isobho se-beetroot, isifuba senkukhu ngamazambane abilisiwe namakhambi, i-compote,
itiye lasemini - isinkwa sokudla, itiye le-chamomile,
isidlo sakusihlwa - amakhekhe ezinhlanzi ane-zucchini noma isitshalo seqanda, itiye,
ebusuku - kefir.
ibhulakufesi - isiphuzo sebhali
isidlo sasemini - ama-apula angama-1-2, ujusi,
isidlo sasemini - isobho seklabishi elisuka eklabishi elisha, inhlanzi ebhakwe ngesaladi lamatamatisi namakhukhamba, itiye,
itiye lasemini - iyogathi, amabhisikidi, i-compote,
isidlo sakusihlwa - i-casserole yemifino, itiye,
ebusuku - iyogathi.
ibhulakufesi - ushizi onokhilimu omuncu, ujusi,
isidlo sasemini - isaladi yemifino enamafutha omnqumo, itiye,
isidlo sasemini - isobho le-puree yemifino, i-veal e-stewed ene-asparagus, itiye,
isidlo sasemini - yoghurt nge-muesli, kissel,
isidlo sakusihlwa - amakhekhe ezinhlanzi anamazambane abunjiwe, isaladi, itiye,
Uma kungenaziphikiso, ungahlela ngezikhathi zokuzila izinsuku. Isibonelo, usuku lwe-apula. Yidla cishe ikhilogremu elilodwa lama-apula ngosuku. Ukudla kwasekuseni, ushizi wekotishi, kwasemini - inyama ebilisiwe ngaphandle kwesitsha esiseceleni, ngaphambi kokulala kefir. Noma usuku lwe-curd: i-casserole, ama-pancake e-cottage shizi, i-curd emsulwa (cishe 500 g), izithelo. Izinsuku zokuzila akufanele zenziwe ngaphezu kwesikhathi esingu-1 ngenyanga.
Ungangezi ushizi enyameni. Iphinda kabili inani lamafutha angenampilo, amakhalori.
Uma ufuna amaswidi ngempela, ungadla ibha likashokholethi we-soy noma izingcezu ezimbalwa zikashokholethi omnyama wangempela onokuqukethwe okuphezulu kobhontshisi we-cocoa.
Kuzindlela zokupheka ezahlukahlukene zokupheka, buyisela amaqanda ngamaphrotheni. Iqanda elilodwa - ama-squirrels ama-2.
Lapho upheka umhluzi wenyama, qiniseka ukukhipha amanzi okuqala lapho inyama iphekwe khona.
Lahla imayonnaise namanye amasoso ngokuphelele. Gqoka amasaladi ngamafutha, kalamula. Ukwenza ukunambitheka kwenyama kugcwale, engeza izinongo noma amakhambi.
Noma yikuphi ukudla kufanele kuhlanganiswe nokuzivocavoca umzimba, ukuyeka ukubhema notshwala, kuhambisana nenqubo yansuku zonke.
Ukudla kwaseMedithera, ukusebenza kwayo
Ngaphezu kokudla kweklasikhi, okusiza ukunciphisa inani lama-lipoprotein aphansi kwegazi egazini, kunenye inketho yokudla okunempilo - iMedithera. Iphinde yehlise i-cholesterol ephumelelayo, kepha inokwehluka kwayo.
Imenyu yansuku zonke ihlanganiswe icubungula izincomo ezilandelayo:
kwasekuseni - okusanhlamvu: i-granola, okusanhlamvu emanzini, i-bran,
kwasemini - i-pasta, inhlanzi noma izitsha zenyama,
kwesidlo sakusihlwa - ukudla kwamaprotheni, okuhambisana nemifino noma izithelo.
Indlela yokupheka ukubhaka kuhhavini ku-foil, ukupheka ukupheka ebhuthini eliphindwe kabili noma ukupheka kancane. Nge-cholesterol ephezulu, ukudla okuthosiwe, noma yiluphi uhlobo lokudla okusheshayo, kwenqatshelwe ngokuphelele.
Imikhiqizo yemenyu yansuku zonke:
amantongomane, imbewu yesame, imbewu yotshilanga (ngaphandle kosawoti no-oyela),
kusuka kumafutha - yi-olive kuphela,
okusanhlamvu - irayisi elinsundu, inhlamvu, amabele, ibhali,
utshwala buvunyelwe - kuphela iwayini elibomvu, hhayi ngaphezulu kwe-150 ml ngosuku esidlweni sakusihlwa.
Imikhiqizo yethulwa kumenyu izikhathi ezi-3-5 ngesonto:
inhlanzi ebomvu yolwandle (i-trout, usalimoni),
isifuba senkukhu esingenasikhumba
amaswidi - uju, kozinaki.
Inyama ebomvu (inyama ebomvu noma yenkomishi) yethulwa ekudleni izikhathi ezine ngenyanga.
Ukudla kwaseMedithera kuhilela ukudla kathathu ngosuku, kanye nemifino yokukhanya kwantambama nobusuku. Kuthatha izinyanga ezintathu kuya kweziyi-5.
ibhulakufesi - i-oatmeal ubisi lwe-skim, isinkwa ngoshizi, itiye eliluhlaza,
isidlo sasemini - isitshalo seqanda esosiwe noma upelepele inhlanzi, itiye,
isidlo sakusihlwa - inhlanzi ebomvu enamatamatisi, ingilazi ye wayini.
ibhulakufesi - amabele abilisiwe, ushizi we-Feta, itiye eliluhlaza,
isidlo sasemini - inhlanzi ebhakwe, igcotshwe nge-pasita, itiye eluhlaza,
isidlo sakusihlwa - amakhekhe ezinhlanzi nge isaladi karoti, ujusi.
ibhulakufesi - isivinini esikhulu, itiye elimnyama elibuthakathaka,
isidlo sasemini - isobho likabhontshisi, isiphuzo semifino, ucezu lukashizi obunzima, itiye noma ikhofi,
isidlo sakusihlwa - inhlanzi ebilisiwe noma ibele lezinkukhu, itiye.
Kunconywa ukudla okulula okulula. Ntambama - kuhlala izithelo, kusihlwa - imikhiqizo yobisi (i-kefir, iyogathi, ushizi we-cottage, oxutshwe nezithelo ezomisiwe).